लामो समयसम्म अध्यारोमा बस्न बाध्य बस्तीलाई मैले उज्यालो दिएको छु
धुलिखेल वडा नं. ८
– वडावाशीको सुख,दुखमा नै मेरो दैनिकी वितिरहेको छ । विश्व नै यस कोरोना (ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ) को महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा हामी पनि यसको चपेटामा छौ । लकडाउन पूर्व र अहिलेको समय फरक रुपमा वितिरहेको छ । पहिलेको सामान्य दिनहरु जस्तो त पक्कै पनि छैनन् । दैनिक समय तालिका एकै प्रकारले वित्दैछन । लक डाउनका शुरुका दिनहरुमा घरबाट विरलै मात्र वाहिर निस्कने गरियो । सामान्यतया विहान मर्निङवाकमा जाने गरियो भने दिनमा घरमा नै बसियो । व्यस्त त सामान्य परिस्थितिको दिन जस्तो छैन । अफिस जान सक्ने अवस्था छैन साथै सबै कामहरु पनि ठप्प भएको हुनाले अन्य काममा जान नसक्नुले पनि फुर्सद नै रहयो । र यहि विचमा साथि भाईहरु संगको भेटघाट, छलफलमा पनि समय दिइयो ।
– समयलाई उपलब्धितर्फ लग्ने या नलग्ने भन्ने कुराको निर्णय आफुबाट नै हुने गर्दछ । जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले आफ्ना वडावाशीहरुको दैनिकिको विषयमा सोचेर नै धेरै जसो दैनिकि मैले विताउने गरेको थिए । यस अलाभा पनि विकास निर्माणलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराको समिक्षा गर्दा गर्दै पनि दिनहरु विते । तर, उपलब्धि मुलक नै र¥यो भन्न पनि सकिन्छ । किनभने, आफ्ना वडावाशीसँग विताउनु पर्ने लामो समय मैले बजेट कताबाट ल्याउने भन्ने संघर्षशिल समयमा विताएको थिए । यतिबेला मैले प्रत्यक्ष जनतासँग सहकार्य गर्ने अवशर मिल्यो। घरमै बस्नु पर्ने यो बाध्यकारी समयले गर्दा परिवारलाई पनि समय दिन पाईयो । यो समयको विचमा बाहिर जान नसक्ने अवस्थाका कारण घरमा नै बसेर काम गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो र यसले गर्दा फरक रुपमा काम गर्ने अवसर पनि मिल्यो । नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरि बैठक, छलफलहरु पनि गरियो । जसले गर्दा यहि असामान्य परिरिस्थतिका विच पनि कामहरु लाई निरनतरता दिन सकियो । र यो विचमा केहि राजनितिक दस्तावेजहरु तथा पुस्तकहरु समेत अध्ययन गरियो जसले गर्दा विषयवस्तुमा थप प्रस्ट हुन मौका मिल्यो । अद्यावधिक प्रविधिको प्रयोगमा समेत अवसर मिल्यो । साथिभाई, इष्टमित्र संग समन्बलाई पुर्नतार्जगी पनि गरियो । यी सबै कुरालाई हेर्दा यो महामारिको विषम परिस्थितिलाई कमसेकम उपलब्धिमूलक बनाउन सकियो ।
– विगतका दिनमा लामो समय सामाजिक सेवामा नै विताउनु परेको थियो । त्यस कार्य गर्दा गर्दै कुन बेलामा राजनीतिमा आईयो भन्ने कुराको ज्ञान नै भएन । राजनिति भनेको मुल नीति हो । यसले नै अन्य नीतिलाई मार्गदर्शन गर्दछ । राजनितिमा म मात्र होईन सबै युवा आकर्षित हुनु पर्दछ । किनकी राजनीति भनेको शासन सञ्चालनका लागि शक्ति संघर्ष तथा यसको अभ्यास पनि भएकाले राजनिति मार्फत नै हामीले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निमार्ण गर्न सक्छौ । जीवनलाई सफल पार्नु छ भने राजनीति गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
युवाअवस्थामै स्थानिय निकायको नेतृत्वदायि क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ।
– आम वडवाशीको जनविश्वास पहिलो कुरा हो । दोस्रो अवस्थामा पाटिको विश्वास पनि हो । म एउटा पार्टिको नेतृत्व गरेर चुनावमा उठेको थिए । जसकारण मैलै पार्टिले देखाएको मार्गनिर्देशण अनुसार नै कार्य गरिरहेको छु । निकट भविष्यमा मेरो वडामा धेरै कुरामा परिवर्तन गर्न चाहेको छु । संभावना भएसँगै र सबैको साथ र सहयोग रहे काभ्रेकै नमुना वडाको रुपमा स्थापित गर्ने संकल्प मैले दिएको छु । यतिबेला विश्वका धेरै वटा राष्ट्रहरु युवाको काधमा रहेको छ । विश्व जगतमा कोरीया चिन जस्ता देशहरु युवाले हाक्दैगर्दा अवको नेपालको नेतृत्वसमेत हामीजस्ता युवाको हातमा जानु आवश्यक रहेको छ ।
– मैले व्यक्तिगत रुपमा भोगेको कुरालाई प्रश्टयाउने हो भने युवाहरु पछिल्लो समयमा देशमा समग्र परीवर्तनमा होमिएका छन् । राजनीतिक आश्था घट्दै गएतापनि देशको अवस्थामा चाख राख्ने भएका छन् । राम्रा कार्यको समर्थन गरिरहेका छन् नराम्रा कार्य हुदै गर्दा विरोध समेत गरिएको पाईएको छ । यहि त हो युवाहरुको राजनीति प्रतिको आकर्षण भनेको नै । होईन र ? खासमा भन्नु पर्दा युवा भनेको नै नयाँ जोस, जाँगर र इच्छा शक्ति तिब्र रुपमा भएको जुझारु प्रकृतिका हुन्छन् । र युवाहरु तत्काल कुनै क्रियामा प्रतिक्रिया जनाउने स्वभावका हुन्छन । र कुनै काम बाट तत्काल नतिजाको अपेक्षा पनि गर्दछन जुन स्वभाविक पनि हो । मेरो भनाईको आशय के हो भने वर्तमान राजनितिक अवस्थालाई मसिनो रुपबाट हेर्ने हो भने पद तथा कुर्सिमोह अझ पनि कता कता बढी मात्रामा नै देखिन्छ जसले गर्दा युवाले खाजेको जस्तो तत्काल नतिजा आउन नसक्दा कतै युवाहरुमा राजनितिप्रति वितृष्णा त जागेन ? तर मलाई के लाग्दैन भने युवाहरुमा राजनितिप्रति आकर्षण घट्दो छ । त्यस्तो अवस्था छैन । अहिले युवाहरुले पनि दल दर्ता गरि राजनिति शुरु गरिरहेका छन् । तपाईले पनि जानकारी लिई रहनु नै भएको होला हाम्रो देशमा युवाहरुको नेतृत्वमा दल दर्ता भएका छन् । पुराना दलहरुको कार्यशैलि प्रति प्रश्न गर्दै नयाँ संघ संगठनको नाममा आफ्नो अभियान संचालन गर्दै आएका छन् । र मलाई विश्वास छ ति युवाहरु पनि राष्ट्रिय राजनितिमा जोडिन पुग्छन । जसमा समय र परिस्थिति अनुसारको राजनितिक जिवनको गति र घटनाक्रमलाई नजिक बाट अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन ती युवा र हामी फेरी पनि संगै हुनेछौं ।
जनप्रतिनिधि हुनुभएको हिसाबले भन्दा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ या पार्टिप्रति ?
– म दुबै क्षेत्रप्रति उत्तरदायी रहेको छु । किनभने मलाई पार्टिले पहिलो अवसर दिएको छ । पार्टिले मलाई नभई अन्य व्यक्तिलाई विश्वास गर्दथ्यो भने मैले जनताको यतिका धेरैःसेवाहरु प्रत्यक्ष गर्न सक्ने अवस्था रहदैन दियो । यो भन्दै गर्दा जनताको विश्वासको अवहेलना गरेको भने होइन । मलाई मेरो वडावाशीले युवा नेतृत्व र सबल नेतृत्वको निम्ती छान्नु भएको छ । यसले गर्दा नै मलाई त्यहि वडावाशीको निम्ती के गर्ने भन्ने प्रत्येक पल सोच्नकोलागि बाध्य बनाईएको छ ।
स्थानीय तह आएपछि र आउनुभन्दा पहिले तँपाईको वडामा के कस्ता परिवर्तन भए ?
– स्थानीय तहको आगमन सँगै मेरो वडामा धेरै कुराहरु परिवर्तन भएको देहमा विद्यमान समस्याको रुपमा रहेको बत्तिको समस्यालाई पनि मैले समाधान गरेको छु । लामो समयसँग अध्यारोमा बस्न बाध्य बस्तीलाई मैले उज्यालो दिएको छु । यहि होईन र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व ? १५० के.भि.ए. क्षमताका विद्युतलाई मैले ६५० के.भि.ए. मा बृद्धि गरेको छु । यो विद्युत क्षेत्रको विकास हो । पहिले हिउदको सितमा समेत चिप्लने बाटो थियो मेरो वडामा अहिले हिउद बर्षाद जे भएपनि आनन्दले बाटो निरन्तर चल्ने अवस्थामा रहेको छ । डाक्टर वाई फुट कार्यक्रम मार्फतबाट स्वास्थ्यकर्मीहरु घर घरमा नै गएर आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेकाछन् । वडाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य चौकिहरुको निर्माण भईरहेको छ ।
कुनै समयमा बिजुलि नपुगेको स्थानमा पचास प्रतिशत अनुदानमा बिजुलिबाट चल्ने ईन्डक्सन चुलो वितरण गरिएको छ । विद्यालयहरुमा विद्युतिय हाजिरि हुन थालेको छ । खानेपानीको सन्धर्भमा कार्यहरु भईरहेको छ । वडाबासीले साना देखि ठुला समस्याहरु सुनाउने गुनासो पोख्ने स्थान पाएका छन् । यहि होईन संघियताको मर्म ?
धुलिखेल नगरपालिका जिल्लाको उतकृष्ट नगरपालिका हुनुको कारण के होला ?
– धुलिखेल नगरपालिका जिल्लाको मात्रै होईन नेपालकै उतकृष्ट नगरपालिका हो । युवाहरुले चलाएको नगरपालिका भएका कारणसँग सँगै यहा सञ्चालन भईरहेको योजना, जनप्रतिनिधिको आधिकारीक विश्लेषणले गर्दा पनि धुलिखेललाई उतकृष्ट बनाउन सहज भएको हो । अबको समय भनेको विकास अनि विकासको समय हो । यहि अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै देश विकासमा अगाडि बढाउनु पर्ने छ । जिल्लाको पर्यटकिय हिसाबले समेत एक नम्बरमा पर्ने नगरपालिकामा हामीले पर्यटन प्रबन्धनका नयाँ नयाँ योजनाहरुलाई अगाडि बढाएका छौ । पछिल्ला समयमा गरेका कार्यले धुलिखेललाई नेपालमा मात्रै नभई विश्वले नै चिन्न सक्ने अवस्था बनाउनमा हाम्रो सहकार्य भईरहेको समेत छ । सन्तुष्ट त कहिले हुन सकिन्न किनकी त्यो मानव प्रवृति हो ।
– भविष्य के हुन्छ भन्ने सन्धर्भमा अहिले नै भनिहाल्न सक्ने अवस्था हुदैन । भविष्यको आकलन नै गर्न नसकिने राजनीतिमा मात्रै हो पनि भनिन्छ । त्यसकारण अब समाज र जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो । पार्टिको ईमान्दार सिपाईको रुपमा कार्यहरु गर्दै जादा कँहा पुगिन्छ भन्ने थाहा नै हुन्न । तर, जे जस्तो जहाँ भईएछ भने पनि देशको समृद्धि आजको आवश्कता हो । देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउन म नै हुनुपर्छ भन्ने मुर्ख टिप्पणी भने म राख्दिन । यद्यपी, हेर्दै जाउ समयले कुन अवस्थासम्म पु¥याउदो रहेछ ।
–देश विकासका सहि पक्षलाई हेर्दै अगी बढ्नुपर्छ । के कार्यगर्दा दिर्घकालिन फाइदा हुन्छ त्यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको छ । क्रमिक विकाससँगै पनि देश विकास हुन्छ । तर, अजको मुख्य समस्या भ्रष्टचार हो यसलाई न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने विकासका लागि धेरै टाढा जान आवश्क छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नेतृत्वको लगनशिलता, योजना र कार्यान्वयन नै यसको मुख्य पक्ष भने हो । नेपाल स्रोत साधनको हिसाबले सम्पन्न देश हो । जलस्रोत कुरा गर्ने हो भने ब्राजिल पछि नेपाल दोस्रो धनि देश हो । त्यस्तै गरि जडिबुटिको हिसाबले पनि हामी धनि छौं । नेपाल जस्तो सानो देश तर स्रोत साधनले सम्पन्न देशलाई विकास गर्न धेरै कठिन भने छैन । विकासको लागि पहिलो कुरा भनेकै स्थायी सरकार हो जुन अहिले नेपाल कम्युनिष्टि पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा रहेको छ । दोस्रो भनेको इच्छाशक्ति तथा सोचको आवश्यकता पर्दछ । साथै रणनितिक योजना निमार्ण गर्नु पर्दछ । र ति योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न हाम्रो नेतृत्व इमान्दारीपूर्वक लागेमा हामी विकसित मुलुक बन्न कति पनि समय लाग्दैन । देशमै उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्ने र रोजगारीको सिर्जना गर्नु पर्दछ । नेपाल पर्यटकीय हिसाबले पनि संभावना भएको मुलुक हो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि हाम्रै देशमा रहेको छ । त्यसैले पनि हाम्रो देशलाई पर्यटकीय गन्तव्य रुपमा बनाउन सक्नु पर्दछ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गरि उत्पादनमा वृद्धि गरि आयातलाई कम र निर्यातलाई बृद्धि गर्नुपर्दछ । र विद्युत नै हाम्रो समृद्धिको मुल ढोका हो यसलाई विशेष प्राथमिकता दिई काम गर्न सक्नु पर्दछ । यि कुरालाई विशेष महत्व दिएर काम गर्न सक्यौ भने मेरो विश्वास छ हामी अवश्य पनि विकसित मुलुक बन्न सक्छौं ।